SAFERWORLD PREVENTING VIOLENT CONFLICT. BUILDING SAFER LIVES မြန်မာနိုင်ငံတွင် လုံခြုံရေးကဏ္ဍပေါင်းစည်းရေး ဆွေးနွေးမှုစာတမ်း အတိတ်မှ အတွေ့အကြုံများနှင့် အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်များစာတမ်း - EPRP ၀က်ဆိုဒ်တည်ဆောက် ပြုပြင်ဖန်တီးမ
You are at:Home»အခြား သိမှတ် စရာများ»SAFERWORLD PREVENTING VIOLENT CONFLICT. BUILDING SAFER LIVES မြန်မာနိုင်ငံတွင် လုံခြုံရေးကဏ္ဍပေါင်းစည်းရေး ဆွေးနွေးမှုစာတမ်း အတိတ်မှ အတွေ့အကြုံများနှင့် အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်များစာတမ်း
SAFERWORLD PREVENTING VIOLENT CONFLICT. BUILDING SAFER LIVES မြန်မာနိုင်ငံတွင် လုံခြုံရေးကဏ္ဍပေါင်းစည်းရေး ဆွေးနွေးမှုစာတမ်း အတိတ်မှ အတွေ့အကြုံများနှင့် အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်များစာတမ်း
By Saferworld on	 ဇူလိုငျ 16, 20170Comments
ဆယ်စုနှစ် သုံးစုခန့်အချိန် အတောအတွင်း၊ Saferworld သည် မိမိ၏ မိတ်ဖက် အဖွဲ့များနှင့်အတူ ပဋိပက္ခနှင့် အကြမ်းဖက်မှုများကို ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရန်နှင့် လူသားတို့၏ ဘ၀များပိုမိုလုံခြုံမှုရရှိစေရန် ကူညီခြင်းလုပ်ငန်းများအား လုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ငန်းများ လည်ပတ်လုပ်ဆောင်သော နိုင်ငံ တော်တော်များများတွင်၊ လုံခြုံရေးအား ၀န်ဆောင်မှု ပေးခြင်းနှင့် ၀န်ဆောင်မှုအား ရရှိခံစားရခြင်းတို့သည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ သို့မဟုတ် လူ့အသိုင်း အ၀ိုင်းတစ်ခုအတွက် ရေရှည်တည်တံ့သော ငြိမ်းချမ်းရေးအားရရှိနိုင်ရန် နည်းလမ်းအား အဆုံးအဖြတ်ပေးသည့် ရှုပ်ထွေး လှသော အချက်များ၏ ဗဟိုချက်မတွင် တည်မှီနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အကြောင်းအရာအပြည့်အစုံဖတ်ရန်